Fortune Treasure - Myanmar Online Game
JDBYG ရဲ့ Slot အသစ်စာရင်းထဲမှာ လူဆော့များပြီးအရမ်းကို Hot နေတဲ့ Slot ကတော့ Fortune Treasure ပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ကျက်သရေရှိတဲ့ Symbol တွေကကံကောင်းခြင်း၊ လာဘ်ကောင်းခြင်းနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုတွေကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး ယူဆောင်ပေးလာနိုင်တယ်”။
ဒဏ္ဏာရီအရတော့ Pixius က အဲ့လိုမျိုးကံကောင်းခြင်းတွေကို ယူဆောင်ပေးလာနိုင်တဲ့ Symbol တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကျတ်သရေအပြည့်နဲ့ Symbol တွေနဲ့ JDBYG ရဲ့ Fortune Treasure ကိုကစားမယ်ဆိုရင်တော့ လာဘ်တွေပွင့်သွားပြီး ကံကောင်းခြင်းတွေ ရောက်လာစေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ရတနာရှာဖွေသူတွေက Multiplayer တွေ Free Game တွေနဲ့ အချီကြီးရနိုင်ဖို့အတွက် Spin ခလုပ်ကို အဆက်မပြတ်ဖိထားပြီး Spin လှည့်ကစားတက်ကြပါတယ်။ Free Game မှာဆိုရင်လဲ Multiplayer က 66 ကြိမ်အထိအများဆုံးတိုးစေနိုင်ပါသေးတယ်။
အဲ့တာကြောင့် ဆုတွေအများကြီးကို အချီကြီး ကံကောင်းစွာနဲ့ ရနိုင်တာပေါ့! ကဲ… အဲ့တော့ လူဆော့များနေတဲ့ ကျတ်သရေအပြည့်နဲ့ Fortune Treasure ကိုဆော့ဖို့အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား? အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင် ဒီကစားနည်းအကြောင်းလေ့လာလိုက်ရအောင်!
ဒီကစားနည်းမှာ Slot ရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဘယ်မှညာ တွက်ပေမယ့်လဲ Free Spin Bonus Symbol ကတော့ ထူးထူးခြားခြား ၂ခုပါဝင်တာတွေ့ရမှာပါ။ လာဘ်ကောင်နဂါးလေးဖြစ်တဲ့ Wild Symbol ကတော့ ဖဲမှာဆိုရင်ဂျိုကာသဘောမျိုး လိုအပ်တဲ့ Symbol နေရာမှာ လိုအပ်သလိုပြောင်းလဲပြီး အစားထိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစားထိုးပေးတဲ့အထဲမှာ Free Spin Bonus တော့မပါပါဘူးနော်။ Free Spin Bonus မှာ အပြာနဲ့အနီ ရတနာနှစ်မျိုးကွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အပြာကတော့ Free Spin နှစ်ခုပေါင်းထည့်ပေးမှာဖြစ်ပြီးတော့ အနီကတော့ Free Spin Multiplayer တစ်ခုပေါင်းထည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ Symbol တွေရဲ့ ပြန်ပေးနှုန်းကိုလဲ ပုံမှာဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဒီကစားနည်းမှာ Free Bonus Game ကတော့အရမ်းကို ထူးခြားတယ်ဗျ။ Free Spin Bonus Symbol အနီနဲ့အပြာ သာကျခဲ့မယ်ဆိုရင် “Hold & Spin” စနစ်ကအသက်ဝင်သွားပါပြီ!
ဒီစနစ်အသက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာ Free Bonus Symbol ကျထားတဲ့ Reel တွေကဆက်မလည်ပဲ တစ်ခြား Reel တွေကို Free Spin Bonus မပေါ်လာတော့တဲ့အထိ (သို့) Reel အကုန် Free Spin Bonus Symbol တွေနဲ့ပြည့်သွားတဲ့အထိ ဆက်ပြီးလှည့်ပါတယ်။
ပြီးသွားရင်တော့ အထက်မှာရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ အပြာရောင် Symbol ကို Spin အရေအတွက် သတ်မှတ်ပြီး အနီရောင်ကို Multiplayer အရေအတွက်လို့သတ်ပြီး အားလုံးပေါင်းလိုက်ပြီးရင်တော့ Free Spin အလှည့်စပါပြီ!
“Hold & Spin” စနစ်မှာ Free Game Symbol တွေရဲ့အရေအတွက်ကိုတွက်ပြီးတော့ Spin အရေအတွက်နဲ့ Multiplayer တန်ဖိုး စုစုပေါင်းရပြီးပြီဆိုရင် သူတို့က အခြေခံအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး Free Spin ကိုစတင်ပါတယ်။
Free Spin လှည့်နေရင်ထပ်ပြီး ကျလာတဲ့ Free Spin Symbol အတွက်ကိုလဲ Free Spin 1 လှည့်စီထပ်ပေါင်းပေးသွားမှာဖြစ်လို့ Free Spin တွေဆတိုး တိုးပြီးထပ်လှည့်သွားနိုင်ပါတယ်! အများဆုံးကတော့ 66x Multiplayer အထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ လှည့်နေရင်း အပြာရောအနီရော ထပ်ပြီးသာကျလိုက်မယ်ဆိုရင် နောက်ထပ် Free Spin နဲ့ Multiplayer တွေရလာပြီးတော့အများဆုံး 50 ထိ Free Spin ရနိုင်ပါတယ်!
Free Spin လှည့်နေတဲ့အချိန်မှာ ပုံမှန် Symbol တွေရဲ့ပြန်ပေးနှုန်းကတော့ ပုံမှန် Spin နဲ့အတူတူပါပဲ။
Free Game Symbol တွေသာ Slot တစ်ခုလုံးပြည့်သွားရင် ကံကောင်းခြင်းတွေကိုလုံးဝအပြည့်ခံစားရမှာဖြစ်လို့ ဒီလိုကျတ်သရေရှိတဲ့ Symbol တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Fortune Treasure Slot ကိုဆော့ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား?
အခုပဲ JDBYG ရဲ့ Slot အသစ်စာရင်းထဲမှာ ထိပ်ဆုံးကိုကြည့်လိုက်ပါ။ Fortune Treasure က မားမားမတ်မတ်ကြီး ရပ်တည်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။